ပုရိသတို့ရဲ့ နှင်း – Grab Love Story
ကျနော့်နာမည်ကဇေရဲပါ ခင်တဲ့သူတွေက ကိုဇေလို့ခေါ်ကြသလို ကိုရဲလို့လဲခေါ်ကြတယ် ကျနော်ကအလုပ်တော့မယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့်အိမ်ကမိသားစုကုန်စုံဆိုင်လေးမှာမိဘတွေကိုကူပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပေါ့ အားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အချစ်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်ပြီးဟိုဖတ်ဒီကြည့်နဲ့ အလုပ်ဝိုင်းလုပ်လိုက်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့အချိန်တွေကုန်နေတာပေါ့
ကျနော်ကအရင်ကတည်းကဆံပင်ရှည်ကောင်မလေးတွေဆိုအရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုဆံပင်ရှည်မလေးတွေကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရင်ချစ်ရရင်ဆိုပြီးတစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ကူးရင်းနေရတာပေါ့ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ထဲကသူတို့ ချစ်သူတွေ မိန်းမတွေကို ပုံတွေမျှပေးတာတွေကိုလဲ အရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုနဲ့တစ်နေ့တော့ဆံပင်ရှည်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို ကျောင်းထဲက ညီကိုတစ်ယောက်က တင်လိုက်တော့အဲတာကို အရမ်းသဘောကျပြီး ပုံလေးတွေထပ်တင်ပေးဖို့ ကို သွားတောင်ပြောခဲ့သေးတာ
အဲ့ဒီမှာပဲ ကျနော့်ဘဝထဲကို နှင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေး ဝင်ရောက်လာခြင်းရဲ့ အစတစ်ခု ဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဗျာ
ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ စာကိုကျောင်းထဲက ညီကိုတစ်ယောက်က မြင်သွားပြီ သူလဲ ဆံပင်ရှည်မလေးတွေနဲ့ ကွတ်ကိုး ကို အရမ်သဘောကျတယ်ဆိုတာကို PM ပို့လာခဲ့တာတွေ သူ့နဲ့ကျနော်နဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြောရင်းခင်မင်သွားပြီ တစ်ရက်တော့ သေချာလေးစကားပြောဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ
“Hi bro” လို့ messenger အသံတစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ ဟိုနေ့ကမှ add ထားတဲ့ ညီကိုပါလား
me: “Hi bro ကျနော်တို့လဲ အခုမှပဲ ဝါသနာတူတွေ သေချာရင်းနှီးပြီးပြောဖြစ်တော့တယ်”
“ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျနော်လဲ ဆံပင်ရှည်နဲ့ ကွတ်ကိုး ကြိုက်တာချင်းတူတော့ လာပြောဖြစ်တာ”
me: “ဆံပင်ရှည်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တာ ဆံပင်ရှည်ကြီး ကို တစ်ခါပဲ ပတ် လိုးဖူးသေးတယ် ဗျာ”
“အေးဗျာ ကျွန်တော့်ကတော့ စော်ရဲ့ ဆံပင်နဲ့ပဲ လုပ်ဖူးတယ် ကျွန်တော့်စော်ရဲ့ ဆံပင်က တင်ပါးကျော်ရုံလေးပဲ ရှိတာ ဆံသားကြီးပြီး အုံထူတယ် ဖြောင့်တယ် ဒါပေမယ့် ဆံသားကြမ်းတယ်ဗျ ဆံသားနုနုလေးနဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကောင်မလေးတွေကိုတော့ သဘောကျမိပါတယ်”
me: “ဆံသားနုနု အုံထူထူ သာဆိုလို့ကတော့ဗျာ ကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း တင်ပါးကျော်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ အတော်ပဲ ကျနော်က အဲလောက်ပိုကြိုက်တယ် အကိုကံကောင်းတာပေါ့ ဆံပင်ရှည် စော်လေးရပြီး သူ့ဆံပင်ကို ပတ်လိုးလို့ရတယ် ဆိုတော့”
“ဆံသားကတော့ အထူကြီးပဲ bro ရေ လီးကိုပတ်လိုက်ရင် ဒစ်ပဲပေါ်တယ် ကျနော်ကတော့ဆော်ကို တခြားဘဲနဲ့ ကုန်းစေချင်တာ စည်းရုံးထားတာတော့ အဆင်ပြေနေပေမယ့် တကယ်အဆင်ပြေမယ့်သူကို မတွေ့သေးတော့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဗျ စမယ်စမယ်နဲ့ မစဖြစ်တာ အဲ့မှာလေ ကျနော့်ကောင်မလေး ဆံပင်ပုံလေး”
me: “ဟာ အကို့စော် အသားအရည်လဲလှ လူလဲ လှမှာဗျ ဆံပင်လဲ အတော်လှတယ်ဗျ ကျနော်သူ့ဆံပင်လေးကို ကိုင်ပြီးတော့ အရမ်းကို အားရအောင် နမ်းရှိုက်ချင်တယ်ဗျာ ပြီးတော့ သူဆံပင်လေးကို လီးမှာပတ်ပြီးတော့ အသာလေး ပွတ်ပြီး ထုချင်သေးတာ ပြီးတော့ အဲလို လေး ထုနေရင်း သူအဖုတ်တစ်ခုလုံး ကို အားရအောင် နမ်းပေး ယက်ပေးချင်လိုက်တာဗျာ သူ့ဆံပင်လေးတွေ လိုးနေရင်းနဲ့ အရမ်းကောင်းလာရင် လေ သူလီးစုပ်ပေးတာလေးခံရင်း သူ့အဖုတ်ရည်တွေ တစ်စက်မကျန် သောက်ပေးချင်တာဗျ သိလား ပြီးတော့ သူ့ ဆံပင်လေးတွေ ပေါ်ကိုလေ ကျနော် ပန်းပစ်ပြီး ဆံပင်အနှံ သုတ်လိမ်းပေးချင်တယ် ပြီးတော့ ကျနော် ဘီးနဲ့ သေချာလေး ဖီးပြီးတော့ အကိုလိုးတာလေးကို ကြည့်ချင်တာ ကျနော်က သူ့ဆံပင်လေးတွေကိုင်ပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ လီးထည့်ထားချင်တာဗျ”
me: “အကို စိတ်တော့မရှိနဲ့ဗျာ ပုံတွေ့လို့ မနေနိုင်ဖြစ်သွားတာ ဆောရီးပဲ”
“မဟုတ်တာဗျာ ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျနော့်စော်လေးကို bro ကိုလိုးစေချင်တဲ့စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ ကျနော့်စော်ကလည်း အထန်လေးဗျ ကျနော်သင်ပေးထားလို့ အောကားထဲက စော်တွေလို လီးစုပ်တတ်တယ် bro လီးကိုဆံပင်နဲ့ပတ်ပြီး ထုပေးရင်း လီးစုပ်ပေးတာ ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ bro အရမ်းကောင်းပြီး ကျနော့်စော် ပါးစပ်ထဲ ပီးသွားရင်လည်း ကျနော့်ရှေ့တင် လရည်သောက်ခိုင်းချင်တာ bro နဲ့ ကျနော့်စော်လေးကို အားရပါးရ လိုးလို့ သူ့ဆံပင်တွေ ရမ်းခါနေမှာ bro လရည်တွေ သူ့ဆံပင်ပေါ်ကို ရွှဲနေအောင် ပန်းချရင် ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်မှာဖြင့်ဗျ ကျနော့်ရှေ့တင်မဟုတ်ဘူး ကျနော့်ကွယ်ရာမှာလည်း ကျနော့်စော်လေးကို လိုးပါဗျာ အားရပါးရသာ လိုးပါ သူ ဘယ်လိုအလိုးခံခဲ့တယ်ဆိုတာ သူပြန်ပြောပြတာလေးလည်း နားထောင်ချင်တာဗျ သူ bro နဲ့ ဘယ်လောက်ထန်ပြီး ဘယ်လိုတွေကုန်းခဲ့တာပေါ့ဗျာ bro လီးကို စုပ်ခဲ့တဲ့ သူ နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းတွေပေးရင်း နားထောင်ချင်တာ bro ကျနော့်စော်လေးကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ချင်တာလေးတွေ bro လိုးချင်တဲ့ လုပ်ချင်တာလေးတွေ ဥပမာ ဖင်လိုးချင်တာလိုမျိုးပေါ့ဗျာ ကျနော်စော်လေးကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေပေးချင်တာဗျ”
me: “အဲလိုဆို ကျနော်တို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်တယ်ဗျ စော်ကို ပြောကြည့်ပါလား အကို သူသာလက်ခံတယ်ဆို ကျနော်တို့အပြင်မှာချိန်းပြီး စကားလေး ဘာလေး ပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာ ကျနော်က အကိုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့ သူလက်ခံနိင်တာကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်ဆိုကျနော်ကော အကိုပါ စိတ်ချမ်းသာရမယ် လို့ ထင်တာပဲ”
“အေးဗျာ အဲတာဆိုကျနော်သူ့ကို ပြောကြည့်လိုက်မယ်လေ သူလဲလက်ခံပြီးသားပါ ပြန်တော့ပြောကြည့်မယ် အဆင်ပြေရင်ပြန်ပြောမယ်ဗျနော် bye”
me: “bye bro”
အဲလိုနဲ့ သူနဲ့ ကျနော်စကားတွေပြောချင်ခဲ့ပြီး သူပို့ထားတဲ့ ဆံပင်ရှည် သူ့စော်လေးပုံကိုကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းလောက်တော့ အရသာခံပြီးထုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ သူ့စော်လေးဆံပင်ရှည်လေးကိုပတ်ပြီး ထုခွင့်ကိုသာရမယ်ဆိုလို့ တွေးတွေးပြီး သူစာပြန်လာမယ့်နေ့လေးကို စောင့်နေမိတော့တာပေါ့
ဒီနေ့ကျော်ကျော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေသလို ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာ သေချာတွေးမိနေသည်၊ မြကျွန်းညိုထဲမှတစ်ဆင့် သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့အပြန်အလှန် ကွတ်ကိုးနှင့်ဆံပင်ရှည်ကြိုက်တာချင်းတူလို့ စာအပြန်အလှန်ပို့ပြောရင်း Facebook မှတစ်ဆင့် သူ့ချစ်သူဆံပင်ရှည်မလေးပုံလေးတွေကိုပြပြီးအလိုးခံနေရာကိုသူကြည့်ချင်ကြောင်းကြားချင်ကြောင်း ထိုသူကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ တကယ်ပဲသူ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုထိုသူနဲ့လိုးမှာကိုသူအကောင်အထည်ဖော်ချင်စိတ်တွေလဲ တစ်ဖွားဖွားဖြစ်နေတော့သည်၊ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်သည်နှင့် သူစိတ်တွေအရမ်းစောနေပြီး သူ့ချစ်သူလေးရှိရာကို အမြန်ဆုံးအပြေးလာခဲ့မိတော့သည်။
ဟိုတွေးဒီတွေးနှင့် ချစ်သူလေးအလုပ်ရှိရာကိုစောရောက်နေပြီး အလုပ်ဆင်းလာတာလေးကိုစောင့်နေတုန်း
“အမလေး ဟာနှင်း လန့်လိုက်တာကွာ အရမ်းကြီးအော်လိုက်တာ”
“အံမာ ကိုကိုကဘာတွေတွေးပြီးဘယ်တွေငေးနေတာလဲ မှန်မှန်ပြောစမ်း ကောင်မလေးတွေကိုငမ်းပြီး တွေးနေတာမဟုတ်လား”
“မဟုတ်ရပါဘူးနှင်းရယ် ကိုကို က နှင်းကိုပဲအရမ်းချစ်တာကိုတွေးလဲ နှင်းအကြောင်းပါပဲ”
“ကိုကိုက ပိုပြီ တကယ်ပဲ အချွဲလေး လုပ်ချင်နေတာလား နှင်းက မချွဲရဘူး ဟွန့်”
“နှင်း အလုပ်ပြီးပြီဆိုကိုကိုတို့သွားကြရအောင် အချိန်လေးရှိတုန်း လာ နှင်း”
“ဟင် ဘယ်သွားဖို့လဲကိုကိုရဲ့ ကိုကိုပဲ ညနေလုပ်စရာရှိလို့ နှင်းကို အိမ်ပြန်ပို့ပြီး သွားရမယ်ဆို”
“ခုက အဲတာအားလုံးထက်အရေးကြီးတာ နှင်းကို ချစ်ချင်နေတာ အချစ်ဆုံးရဲ့လာ ကိုကို ဟိုတယ်အခန်း booking လုပ်ထားတယ်”
“ကိုကိုကလဲ ဇွတ်ပဲ ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လို့လဲ ကိုကိုရဲ့”
“လာပါ နှင်းရာ မေးမနေပါနဲ့ နှင်းကို ချစ်ချင်လို့ အရမ်းလိုးချင်နေလို့ ကိုကို့ ချစ်သူလေးကို”
“ကိုကိုကလဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရမ်းကဲနေပါလား သူများတွေ ကြားသွားမယ် ကဲကဲ သဘောပါရှင် သွား သွား ဟုတ်ပြီလား”
ကျော်ကျော်လဲ ချစ်ရသူလေးလက်ကိုကိုင်ပြီး အမြန် Taxi တစ်စီးတားလိုက်ပြီး ဟိုတယ် ကိုဦးတည်လိုက်တော့တယ်၊ နှင်းကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ထားရင်း ချစ်ရသူလေးကို သေချာထပ်စည်းရုံးဖို့အတွက်တွေးနေမိတော့တယ်။
နှင်းပွင့်လွှာ တစ်ယောက် ကိုကျော် ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ တွေးမရဖြစ်နေတယ်၊ ကိုကိုက အမြဲမပြောမဆိုနဲ့လုပ်တာဘာမှမရှိပါပဲခုချက်ချင်းသူ့ကိုဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားတော့ထူးဆန်းနေတော့တယ်၊ ကိုကိုကသူ့ကိုချစ်သူဖြစ်ကတည်းကချစ်စနိုးနဲ့မြတ်နိုးလို့ နှင်းလို့ အမြဲခေါ်တာလေ အရင်ကလဲရည်းစားတွေထားဖူးတယ်ဆိုပေမယ့်ကိုကိုကတော့နှင်းကိုအရမ်းချစ်တာ နှင်းကလဲကိုကို့ကိုအရမ်းချစ်တော့ကိုကိုဖြစ်စေချင်တာတွေကိုအမြဲသူဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတယ် ကိုကိုနဲ့မှထူးဆန်းတာတွေကိုသူလဲကြုံတွေ့ရတာတွေများတယ် တစ်ခါမှမတွေးမိတာတွေပေါ့။
အရင်ချစ်သူတွေနဲ့တုန်းကလဲနှင်းအဖုတ်လေးကိုယက်ပေးတာ နှင်းကိုလိုးတာ နောက် နှင်းကိုသူတို့လီးတွေကိုစုပ်ခိုင်းတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ကိုကိုကမတူဘူးလေ၊ နှင်းကိုလီးစုပ်ခိုင်းတုန်းကလဲ ဒီတိုင်းစုပ်ခိုင်းတာတွေ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားဟိုကားတွေထဲကမင်းသမီးတွေလို ဥတွေယက်တာနမ်းတာတွေ နောက်သူ့လီးကိုယက်လိုက်စုပ်လိုက်နဲ့လုပ်ခိုင်းတာတွေ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အရင်းထိဖိစုပ်ခိုင်းတာတွေစုံစိနေအောင်ကို သေချာသင်ပေးပြီးလုပ်ခိုငးတာ၊ နှင်းလဲ ကိုကို့ကျေးဇူးကြောင့်နိုင်ငံခြားကားထဲကမင်းသမီးတွေထက်ကိုလီးစုပ်တာတော်တော်ကျွမ်းနေပြီ နောက်တော့လိုးတာမှ ပုံစံမျိုးစုံ နေရာမျိုးစုံမှာကိုလုပ်တာ နှင်းလဲကိုကိုနဲ့မှ အရှက်ဆိုတာ မရှိအောင်ကိုကုန်တော့တာပဲ။
ခုတစ်လောပိုဆိုးတာက သူနဲ့လိုးနေတုန်း နှင်းအဖုတ်ကို နှင်းကြိုက်တဲ့ဘယ်မင်းသားကယက်ပေးရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ နှင်းအရင်ရည်းစားကိုခုလီးပြန်စုပ်ပေးရရင်ဘယ်လိုနေမလဲ နှင်းအဖုတ်ကိုတစ်ခြားသူကလိုးနေရင်နှင်းစိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရလဲနဲ့ မေးမေးနေတော့တာလေ။ စစချင်းတော့နှင်းစိတ်ဆိုးပေမယ့်ကိုကိုက ခံစားမှုအသစ်ဆိုပြီး နှင်းကိုပြောတော့နှင်းလဲသာယာမိတာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်၊ ကိုကိုနဲ့လိုးရင်း တစ်ခြားသူလိုးနေသလိုခံစားတတ်လာတယ်လေ ကိုကိုကတော့ အဲတာ ကွတ်ကိုး ခံစားချက်လို့ပြောတာပဲ နှင်းကတော့နားမလည်ပါဘူး ကိုကို စိတ်ချမ်းသာရင်နှင်းကတော့ကိုကိုအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမှာပဲလေ၊
ခုလဲ ကိုကို ချစ်ပေးတာကိုခံရတော့မှာကို သိနေလို့ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲမှီရင်းအရည်လေးတွေတောင်စို့လာနေတာပေါ့ နှင်းလဲအတွေးတွေများနေတုန်း
“နှင်း ရောက်ပြီဆင်းမယ်လေ ဘာတွေတွေးနေတာလဲ အချစ်ရဲ့”
“ရောက်ပြီလားကိုကို နှင်းလဲ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ရောက်မှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာ”
“လာနှင်း အခန်းထဲ သွားရအောင်”
အခန်းထဲ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကိုကျော်တစ်ယောက် ချစ်သူလေးနှင်းကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ ဒီနေ့အရမ်းတွေလှနေတော့တယ် နှင်းတို့အလုပ်က ယူနီဖောင်းကန့်သတ်ချက်မရှိတော့ ဒီနေ့နှင်း ဂါဝန်လေးနဲ့ ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးထိရောက်တဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးကိုဖြန့်ထားတော့ အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်
ကိုကျော်လဲ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်း နှင်းကိုဆွဲပွေ့ချီလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တော့တာပေါ့ ပြီးတော့ နှင်းဂါဝန်ကိုဆွဲလှန်ပြီး နှင်းအဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ကလိရင်း နှင်းကိုနမ်းပစ်လိုက်တော့သည်
“အို ကိုကို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ နေပါဦး ကိုယ်လက်ဆေးပြီး အဝတ်တွေချွတ်ပါရစေဦး”
“မရတော့ဘူး နှင်းရယ် နှင်းလဲ အရည်လေးတွေစို့နေတာကိုး ကိုကိုလိုးပေးတာခံချင်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား အချစ်ရဲ့ ကိုကိုကတော့မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ”
အထိအတွေ့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သော နှင်းမှာလဲ ကာမစိတ်များ တစ်ဟုန်ထိုးတတ်လာပြီး ကိုကိုကတော့ နှင်းရဲ့ စောက်စိလေးကို ပွတ်ကာချေပေးရင်း နှုတ်ခမ်းကို နမ်းနေတော့သည်၊ စောက်စိလေးကို ကလဲအရမ်းတစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် နှင်းခဗျာကိုကို့ နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်းပြန်ပြီးနမ်းနေမိတော့တယ်။
ကိုကိုကအနမ်းများကို ရပ်လိုက်ပြီး နှင်းပင်တီလေးကို ချွတ်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြဲပြီး နှင်းအဖုတ်လေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ပင့်ကာ ယက်ပေးလိုက် နှင်းအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်လိုက်နမ်းလိုက်နဲ့ နှင်းကလဲ ကာမစိတ်များတရိပ်ရိပ်ပိုပို တက်လာပြီး အဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးလဲ စောက်ရည်များရွဲစိုလာတော့သည်၊ ကိုကို့ရဲ့ ကာမခလုတ်တွေ နိုးစွတာ က နှင်းအတွက်အရမ်းကောင်းလွန်းတာကြောင့် နှင်းလဲ ဂါဝန်နဲ့ ဘော်လီတွေကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကိုကို အကြိုက် ဆံပင်ရှည်တွေကို ကုတင်ပေါ် ဖြန့်ထားလိုက်ပြီး နို့တွေကို ဆွဲညှစ်ကာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးပြီး ကိုကိုယက်ပေးတာကို အပြည့်အဝ ခံစားနေမိတော့သည်။
“ကိုကိုရယ်….. ဘယ်လိုတွေတောင်လုပ်တတ်တာလဲကွာ…….နှင်းအရည်တွေအရမ်းထွက်နေပြီကွာ……. ကိုကိုရယ်…ကောင်းလိုက်တာ…အား အ ဖိစုတ်‌ပေးပါကိုကိုရယ် အစေ့လေးကိုလဲ …ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်…အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ”
“အား…အ..အင့်…အဟင့် ….ကောင်းလိုက်တာ…ဖိယက်ပစ် ကိုကို… အား….ကောင်းတယ် အ….အိ….”
ကိုကိုကတော့ စောက်စိလေးကို ဖိဖိယက်နေပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်နှစ်ချောင်းပူးထည့်ကာ ထိုးထည့်လိုက်တော့သည်။
“အား…ကောင်းလာပြီ…ကိုကိုရယ်…အ..လုပ်ပါ…အစေ့လေးကိုစုပ်…ဟုတ်တယ်..ဖိစုပ်ပေး…ကိုကိုလက်နဲ့လိုးပေး…ကောင်းလိုက်တာ.. အား….အား….အ…အင်း…. လုပ်ပါကိုကိုရယ်…နှင်းအရမ်းကောင်းလာပြီ…ပြီးတော့မယ်…ကားပေါ်မှကတည်းကခံချင်နေတာ..လုပ်ပါ…အား….ပြီးပြီ..ကိုကိုရယ်…အ.အ. ပြီးပြီကွာ..အဟင့်…အား…”
နှင်းခဗျာ နို့တွေကိုဖိညှစ်ဆွဲရင်း ခါးကို ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ကော့တင်ကာ ကိုကို့ခေါင်းကို ပေါင်နှင့်ညှပ်ရင်း အရည်တွေ ရွှဲနေအောင်ထွက်ကာ ကာမရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြီးဆုံးချင်းကို ရောက်သွားပါတော့သည်၊ ကိုကိုက နှင်းပြီးသွားတော့မှ နှင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို အဖုတ်ရည်များပေနေသော သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့် မက်မက်မောမော လာနမ်းပေးပြီး နှင်းကလဲ နှင်း အဖုတ်ရည်များနှင့် စိုနေသော့ကိုကို့နှုတ်ခမ်းကို ဖိစုပ်ကာနမ်းရင်း အမောဖြေနေပါတော့သည်။
ကျော်ကျော်လဲ သူယက်ပေးတာကိုခံပြီး အရမ်းဟော့ကာ ပြီးသွားသောနှင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းရင်း ထရပ်လိုက်သည်၊ နှင်းကတော့ သူ့ကို ချစ်ရည်လဲ့သော အကြည့်များနှင့် ကြည့်နေပါတော့သည်၊ ကျော်ကျော် လဲ ဒီနေ့တော့နှင်းကိုတစ်ခြားသူနှင့်တကယ်အလိုးခံရသလိုခံစားရအောင်လိုးပေးပြီး နှင်းကိုအပြင်မှာတကယ် သူစိမ်းနှင့်လိုးချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်မည် ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
“နှင်း အချစ် ကောင်းရဲ့လားဟင် ကိုကို ယက်ပေးတာ”
“ကိုကိုရယ် ကောင်းတာမှ နှင်းအဖုတ်လေးနဲ့ ကိုကို့ လျှာလေးကပ်သာထားလိုက်ချင်တော့တယ် ကိုကို သိလား”
“ကဲ နှင်းအရမ်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့ ကိုကို့ ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်မှာလဲ ပြော မဟုတ်ရင် ကိုကို က မလုပ်ပေးတော့ပဲ နေလိုက်မှာ”
“ကိုကိုရယ် အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုကိုသာမလုပ်ပေးတော့ရင် နှင်းတော့ ခံချင်လွန်းလို့ သေတောင် သေမလား မသိဘူး ကိုကို့သဘော နော် ကိုကို ဘာဖြစ်စေချင်လဲ ပြော”
“အဲတာဆို ကိုကို အရင်က နှင်းကို ပြောဖူးသလိုလေ နှင်းကို တစ်ခြားလူနဲ့လိုးတာလေးကို ကိုကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောတာ အဲဒါအခု နှင်းက ကိုကို့ ကို ကိုကို မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားလူလို့ တွေးပြီး ကိုကို့လီးကို စုပ်ပေးရမယ် အကောင်းဆုံးစုပ်ပေးရမှာနော် နောက်ပြီး အလိုးလဲ ခံရတယ် ကိုကို မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားလူလိုးတယ်ပဲ တွေးပြီး ခံရမှာနော် အဲလိုတွေးလို့ရအောင်လဲ နှင်းမျက်လုံးလေးတွေကို အဝတ်လေးနဲ့ ကာထားမယ် ကိုကို လို့မတွေးအောင် ကဲဘယ်လိုလဲ နှင်း”
“ဟင် ကိုကိုကတော့ လုပ်ပြီ တော်တော်လေးကို နှင်းကို တစ်ခြားလူလီးကို စုပ်စေချင်နေတာလား အလိုးခံနေစေချင်တာလား ဟွန့်”
“နှင်းပဲ ကိုကို ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆို ဘာလဲ နှင်းက မလုပ်ပေးချင်လို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရယ် စိတ်တော့မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ ကိုကို့အတွက်ဆို နှင်းဘာမဆိုလုပ်ပေးမှာပါ စိတ်ချ နော် နောက်မှ နှင်းကိုသာ အချစ်မလျော့နဲ့”
“အိုး စိတ်ချလိုက် ချစ်ကလေးရယ် ကိုကိုက ပိုပိုပြီး ချစ်လာမှာ စိတ်ချနော်”
“ကဲကဲ သဘောရှိပါရှင့် ဟုတ်ပြီလား”
“ချစ်လိုက်တာ နှင်းရယ် အဲဆိုဆို နှင်းမျက်လုံးလေးကာထားလိုက်နော် သိလား နှင်းကိုလိုးပေးမယ့်သူက အပြင်မှာစောင့်နေတယ်လို သဘောထားလိုက် ရော့ နှင်းမျက်လုံးလေးကို အဝတ်လေးသေချာစည်းလိုက်နော်”
“ဟုတ်ကိုကို နှင်းသေချာလေး စည်းလိုက်မယ်”
“အဲတာဆို နှင်လဲစည်းပြီးပြီဆိုတော့ ကိုကိုတို့စရအောင်နော် ကိုကို သူ့ကို ခေါ်လိုက်တော့မယ်နော် ကိုကိုက ဘေးမှာပဲ ထိုင်ကြည့်နေမှာနော် နှင်းကလဲ တစ်ခြားနှင်းမသိတဲ့ သူစိမ်းလို့ တွေးရမယ်နော်”
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းသဘောတူပြီမို့ စရန်ပြင်လိုက်တော့တယ်။ အရင်ဆုံး အခန်း တံခါးကို အပြင်မှ တစ်ယောက်ဝင်လာသည့်ပုံဖြင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လူနှစ်ယောက်ပုံစံဖြင့် အသံဖျက်ကာ စကားပြောလိုက်သည်။
“လာ အကို ကျနော့်စော်လေးကတော့ အကိုလိုးတာခံဖို့ ဟိုမှာ အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဗျ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ ကျနော်လဲ အကို့တို့ ခေါ်တာကို စောင့်နေတာ အပြင်မှာ”
“နှင်း ကို အကို စိတ်တိုင်းကျ သဘောကျသာ လုပ်ပါတော့ဗျာ ကျနော်အကုန်ခွင့်ပြုပါတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ အကို အကို့စော်လေးက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ အသားလေးလဲ ဖွေးနေတာပဲ ဆံပင်ကလဲ အရှည်ကြီး အရမ်းလှတာ ကျနော်စတော့မယ်နော်”
“ဟုတ်ကဲ့ စပါ စပါ”
နှင်းစိတ်ထဲ အတော်ရယ်ချင်သွားသည်၊ ကိုကိုက အရူးကြီးလို တစ်ယောက်တည်းသူကပြောလိုက် အသံဖျက်ပြောလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာကိုး၊ အောင့်ထားသည့်ကြားက ခစ်ခနဲ ရယ်မိသွားတယ်။
“နှင်း မရယ်နဲ့လေ ကိုကိုက နှင်းသေချာ အမှန်လိုခံစားလို့ရအောင် လုပ်ပေးနေတာကိုကွာ”
“ဆောရီးကိုကို နှင်းကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ထပ်မဖြစ်စေရဘူးနော်”
နှင်းလဲ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားမှာ စိတ်ပူပြီး တကယ် တစ်ခြားတစ်ယောက် နဲ့လိုးရတော့မှာကိုပဲ စိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်တော့တယ်။ ကိုကို သေချာအတည်ကြီးလုပ်နေတာနှင်းကြောင့်တော့ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေ။
“ညီမလေး နို့လေးတွေ ကကျစ်ကျစ်လုံးလုံးလေကွာ အကို ကိုင်ကြည့်မယ်နော်”
အသာလေးနှင်းနို့လေးတွေကိုကိုင်ပြီး နို့ထိပ်စူစူလေးတွေ ကို စို့ပေးနေလိုက်သည်။
“အရမ်းစို့လို့ ညှစ်လို့ကောင်းတာပဲ ညီမရယ်”
“အကို နှင်းက အကို့လီးကို တစ်အားစုပ်ချင်နေရှာတာ အကိုပေးစုပ်လိုက်နော်” ဟု ကိုကျော့်အနေဖြင့်ပြောလိုက်သည်၊
“ဟုတ်အကို ညီမလေး အကို့လီးကို သေချာလေး စုပ်ပေးနော် ညီမ ချစ်သူရှေ့မှာ တစ်ခြားလူလီးကို အားရအောင် စုပ်ပြလိုက်နော်”
ကိုကျော်လဲ နှင်းခေါင်းကိုကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းနားသို့ သူ့လီးကို တေ့ပြီး အသာလေး ပွတ်ပေးလိုက်သည်၊ နှင်းလဲ ကာမစိတ်တွေ တစ်စစ တက်လာပြီမို့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟကာ ကိုလူစိမ်းရဲ့ လီးကို စတင်စုပ်ပေးလိုက်သည်၊ လီးထိပ်လေးကို အသာလေး လျှာနဲ့ ယက်ပေးပြီး တစ်ချောင်းလုံးကို အထက်အောက် ဖွဖွလေး ယက်ပေးနေပြီး ပါးစပ်ဟကာ လီးတစ်ချောင်းလုံငုံပြီး စုတ်ပေးနေမိတော့သည်၊ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုလူစိမ်းရဲ့လီးကို အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင် ဆွဲပြီး စုပ်ပေးနေမိတော့သည်၊ ကိုလူစိမ်းလဲ အရမ်းအရသာရှိနေပြီမို့ နှင်း စုပ်ပေးနေတော့တာကို မစောင့်တော့ပဲ ခေါင်းကိုကိုင်ကာ နှင်းပါစပ်လေးကို အရှိန်တဖြည်းဖြည်းတင်ကာ အသာလေး စလိုးပေးတော့သည်၊ နှင်းကတော့ ကိုလူစိမ်းလုပ်သမျှကို စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ခံနေမိတော့သည်။
“ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ ကွာ ညီမလေး နှုတ်ခမ်းလေးတွေက နူးညံနေတာပဲ တစ်ခြားလူလီးက ညီမလေး ပါးစပ်ကိုလိုးနေတာ ခံလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်”
နှင်းလဲ အရမ်းသဘောကျတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းနေအောင် စုထားပြီး လီးနဲ့ ပါးစပ်ကိုလိုးပေးနေတာကိုခံယူနေရင်း အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတော့သည်၊ တစ်ခြားသူစိမ်းလီးလို့ တွေးထားသည့်အတွက် စိတ်တွေလဲ ပိုကြွနေမိသည်ကို သတိထားမိနေတော့သည်။
လီးတစ်ချောင်းလုံးကို နှင်းပါးစပ်ထဲတွင်အဆုံးထိ အရင်းထိ ဝင်အောင် စောင့် စောင့် ထည့်လိုက်ပြီ နှင်းခေါင်းကိုဖိကိုင်ကာ လိုးနေမိတောသည်၊
“လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပါးစပ်ကွာ စုတ်ရော့ စုတ်ထား နင့်ချစ်သူရှေ့မှာ စုတ် ကောင်းလိုက်တာကွာ”
နှင်း မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲလာမှ အသက်ကို ကောင်းကောင်းရှုဖို့ ခက်လာတော့တဲ့ အထိ အရင်းထိ ဖိကပ်ထားလိုက်တော့သည်၊ ပြီးတော့မှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနှင်းပြန်အဆင်ပြေလောက်ပြီဆိုမှ နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး အားဖြင့် စောင့်ထည့်လိုက်ရာ လီးကအရင်ကထက် အားပြင်းပြင်းဖြင့် အရင်းထိအောင် ဆောင့်ဝင်သွားတော့သည်။
“အားကောင်းလိုက်တာကွာ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အရင်းထိ စုတ်ပြီး အလိုးခံနေတာ ချစ်သူရှေ့ စုတ်နေရတာကို အရမ်းကြိုက်နေတာလား စုတ်စမ်း အင့်ကွာအင့်…အား…”
နှင်းလဲ တရစပ် မရပ်မနား စောင့်ဝင်လာတဲ့လီးကို အားရအောင်စုပ်ပေးနေရင် အဖုတ်ရေတွေလဲ တစ်တောက်တောက် ကိုကျနေတော့သည်။
“ဟာ အကို တွေ့လား အကို့ ချစ်သူ ကျနော့်လီးကို စုပ်ပြီး အဖုတ်ရည်တွေ ရွှဲနေတာ အရမ်းကို ရွနေတာပဲ ကျနော့်လီးကို တော်တော်ကြိုက်နေတာ”
“ဟုတ်ပဗျာ နှင်းရယ် ကိုကို့ရှေ့မှာ စုပ်ပေးနေရတာ အရမ်းကြိုက်နေတာလား အရည်တွေ ထွက်နေတာ အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီလား ဟုတ်လား”
“ဟုတ်လား ညီမလေး နှင်း ညီမလေး ချစ်သူပြောသလို အလိုးခံချင်နေပြီလား”
နှင်းလဲ အရမ်းစိတ်တွေ ထလာပြီး ပါးစပ်ကို အားကုန် စောင့်လိုးတာခံနေရင်းခေါင်းကို အားရပါးရ ညိမ့်ပြလိုက်တော့သည်၊ နှင်း စိတ်ထဲလဲ အခုလို တစ်ခြားလူလီးကို အရမ်းကြိုက်သည့်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီး ကိုကို့ ရှေ့မှာ အသားကုန် အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားပေါ်လာတော့သည်။
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပါစပ်ထဲ ၅ ချက်လောက် အားနဲ့ ဖိစောင့်ပေးလိုက်ပြီး နှင်း တွံတွေးတွေ ရွှဲနေသော သူ့လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
“ညီမလေး အရမ်းအလိုးခံချင်နေလား ပြကြည့်ပါဦး တစ်ခြားလူလီးနဲ့ အလိုးခံချင်နေတဲ့ အရည်ရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်လေးကို”
နှင်းလဲ လှဲချလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို ဖြန့်ခင်းကာ ပေါင်ကိုကားထားလိုက်ပြီး အဖုတ်လေးကိုဖြဲပြလိုက်တော့သည်”
“ဟာ ဟုတ်တာပေါ့ ကြည့်စမ်း အလိုးခံချင်နေတာ အရည်တွေကို အများကြီးပဲ အကိုကြည့်ပါဦး အကိုကောင်မလေး ကျနော့်လီးကိုခံချင်လို့ ဖြစ်နေတာ ဆံပင်ရှည်တွေကို ဖြန့်ထားပြီး အဖုတ်ကို ဖြဲထားတာ အရမ်းလိုးချင်စရာ ဗျာ”
“လိုးပါဗျာ ကျနော့် ချစ်သူကောင်မလေးကို လိုးပေးပါ နော် လိုးလိုက်ပါ”
“ညီမလေး အလိုးခံချင်လား ပြော ခံချင်လား”
“ခံချင်ပါတယ်ရှင် လိုးပေးပါတော့ အကို့လီးကြီးနဲ့ ညီမလေး ကိုလိုးပေးပါတော့ ခံချင်လွန်းလို့ပါ”
ကျော်ကျော်လဲ အရမ်းရွထနေတော့ ချစ်သူလေး နှင်းရဲ့ပေါင်ကြာကို ဝင်ကာ လီးကြီးဖြင့် နှင်း စောက်စိလေးနှင့် အဖုတ်တစ်ခုလုံးအား သေချာပွတ်ကာဆွဲလိုက်သည်။
“အား……..အကိုရယ်….ကောင်းလိုက်တာ….. အား…..အဟင့် …..ထည့်လိုက်ပါတော့ အကိုရယ်…..နှင်းအဖုတ်ထဲကို……. အား….အ….အကို့လီးကြီးထည့်ပါတော့….”
နှင်းလဲ အရမ်းကောင်းလာပြီးခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာလာသည့် အချိန်တွင် နှင်းအဖုတ်လေးထဲသို့ လီးတစ်ချောင်းလုံး ထိုးထည့်ကာ ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တော့သည်၊ နှင်းအဖုတ်လေးမှာ ခုထိ ဘယ်လိုလိုးလိုး အပျိုစောက်ဖုတ်လေးလို အရမ်းတင်းကြပ်ကာ အရသာထူးတွေ ပေးစွမ်းနေတော့သည်၊ လီးတစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်လေးထဲသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာချိန်တွင် နှင်းမှာလဲ အရမ်းကောင်းနေကာ ခါးကို ကော့တင်ပြီး အံကြိတ်ထားလိုက်တော့သည်၊ လီးဝင်သည်နှင့် နှင်းအဖုတ်လေးကို ပုံမှန်လေး စောင့်ကာစောင့်ကာ လိုးပေးနေမိရာ နှင်းမှာလဲ နို့တွေကိုကိုင်စွဲ ညှစ်စွဲကာ ခေါင်းကို ဘယ်ရမ်း ညာရမ်းရင်း ကော့ခံနေလိုက်တော့သည်။”အား…..ကောင်းလိုက်တာ….အကိုရယ်…..အ…..လိုးပေးပါ….. အား…..ကောင်းတယ် ……အဟင့် အ…..အူး…….အ”
ကျော်ကျော် တစ်ယောက်ကတော့ နှင်းအရမ်းကြီး အရင်ကထက် ပိုဟော့ကာ အားရပါးရခံနေသည်ကို ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေပြီး နှင်းအဖုတ်လေးမှာ လီးကို အားနဲ့ ဖိဖိညှစ်ပေးနေသောကြောင့် အကြောများထဲထိစိမ့်အောင်ကောင်းနေပြီး အရမ်းလိုးလို့ ကောင်းနေတော့သည်။
“နှင်း….ညီမလေး….နင့်ချစ်သူရှေ့မှာ အကို့လီးနဲ့ အလိုးခံနေရတာကောင်းလား ဘယ်လိုလဲ ပြော”
“ဟင့်…ကောင်းတယ် အကိုရယ်….အကို့လီးက အရမ်းကောင်းတယ်….ကိုကို့ရှေ့မှာ အလိုးခံနေရတာလဲ အရမ်းကောင်းတယ်….. အား…..အ……”
“ဟုတ်လားနှင်း နှင်းကြိုက်လား ကိုကို့ရှေ့မှာ တစ်ခြားလူက လိုးပေးတာခံနေရတာ အရမ်းကြိုက်လား”
နှင်းကိုယ်တိုင်လဲ တကယ်တမ်းကိုကို့ရှေ့ တစ်ခြားလူက လိုးတာ ခံချင်စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် ပြင်းပြလာတော့သည်။
“ကောင်းတယ် ကိုကို အရမ်းကောင်းတာ ကိုကိုနဲ့ အလိုးခံရတာထက် တစ်ခြားလူက ကိုကို ရှေ့လိုးပေးတာကို ခံရတာ ပိုပြီး ကောင်းတယ် ကိုကိုရယ်”
နှင်းလဲ တဆစ်ဆစ်နဲ့ အရမ်းကောင်းလာကာ ပိုပိုပြီး ကော့ခံနေမိတော့သည်၊ ကျော်ကျော်ကလဲ ပိုပြီး အချက်စိပ်စိပ်လေး အားထည့်ကာ ပင့်ဆောင့်ပြီး လိုးပေးနေလိုက်တော့သည်။ ကျော်ကျော် လိုးချက် ကောင်းလွန်းသောကြောင့်နှင်းဘယ်လိုမှ ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ စိတ်တွေ အမြင့်ဆုံးတက်လာကာ စောက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး အရမ်းကောင်းလာကာ ပြီးဆုံးခြင်းကို ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
“ဟာ နှင်းပြီးသွားပြီပဲ အရမ်းကောင်းပြီး ပြီးသွားတာပဲ ကွာ”
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပြီးသွားပေမယ့် မရပ်ပဲ နှင်းရဲ့ နို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်ဖက် တစ်ချက်စီ ဖိညှစ်ရင်း အားနဲ့ ဖိစို့လိုက်ပြီး ဆက်တိုက်လိုးပေးနေမိတော့သည် ရာဂစိတ်များ အရှိန်အလွန်တတ်နေသောကြောင့် နှင်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေမှလည်း ထောင်ထနေတော့သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပြင်းထန်လှ သော ကိုကို့လိုးချက်များကြောင့် နှင်းမှာလဲ တစ်ခြားသူလိုးပေးနေသည်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ကြီးစိုးလာကာ ထိုအရာကို လဲ စွဲလမ်းတောင့်တစိတ်တွေ ဖြစ်လာပြီး တစ်ခြားသူလီး အစစ်ကို ခံချင်စိတ်များ အရမ်းပြင်းပြလာတော့သည်။
“အား…..ပြန်ကောင်းလာပြန်ပြီ…အကိုရယ် လိုးပါ ဆက်ပြီး လိုးစောင့်နေပေးပါ အင်း….အ….လိုးပါရှင်……. အား…..နှင်းကို လိုးပစ်ပါ…အ….အင့်”
နှင်းခဗျာလဲ အရှက်တရားတွေ မေ့သွားပြီးးကျော်ကျော်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်များအောက်တွင် တစ်ခြားသူလီးဟု တွေးကာ အခန်းတစ်ခုလုံး ဟိန်းနေအောင် အော်ညည်းရင်း အားပါးတရ ခံနေမိတော့သည်
ကျော်ကျော်က နှင်းကို ကုတင်ပေါ်တွင် ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်မှနေကာ နင်းရဲ့ အရည်ရွှဲနေသော အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးကြီးကိုထိုးထည့်ပြီး ခါးလေးကိုဆွဲကိုင်ကာ အားဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ အရင်ကထက်ပိုကြမ်းပြီး ချစ်သူရှေ့ တစ်ခြားလူလီးဖြင့် အလိုးခံသည်ဟုတွေးကာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လိုးဆောင့်နေသော ကျော်ကျော့်လိုးချက်များကို အရမ်းခံလို့ကောင်းနေပြီး နောက်မှာ ဆောင့်ကာ လိုးနေသော ‌ကျော်ကျော်လီးက သားအိမ်ထဲထိလာကာ ဖိဆောင့်နေမိသောကြောင့် နှင်းခဗျာ မခံစားဖူးသော အရသာကို ခံစားရင်ကာမဆိပ်တွေ အမြင့်ဆုံးထိုပြန်ပြီးတက်လာပါတော့သည်။
“အား……အကို ကောင်းတယ်….. အား…….အကိုရယ်…အကိုရယ်…လိုးပါ နှင်းဖင်ကုန်းထားပေးတာ ဆောင့်လိုးပါ အကိုရယ်”
“ဘာပြောတာလဲ နှင်း…ညီမလေး…အကိုက ရပ်လိုက်ဖို့လား ….ဟင်…..ဟုတ်လားပြောပါ……….”
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းခါးလေးကို ကိုင်ထားပြီး ခဏ ထိုးရပ်ထားပြီး မေးလိုက်သည်။
“အာ….အကို…..ဘာလို့ ရပ်လိုက်တာလဲ…. အလိုမဟုတ်ဘူးလေ……. ဆက်လိုးပေးပါ……ညီမ….အရမ်းကောင်းလာပြီ”
“ဟုတ်လား…ဆက်လိုးပေးရမှလား…ညီမလေး……နင့် ချစ်သူကို…ပြောလိုက်လေ …အကို့ကို ဆက်လိုးပေးဖို့….”
“ကိုကို…ပြောပေးပါ….နှင်းကို ဆက်လိုးပေးဖို့….နှင်းအရမ်းကောင်းနေပြီ….ဆက်လိုးပေးမှဖြစ်မှာ..နှင်းအရမ်းကောင်းနေပြီ…..သူ့လီးနဲ့ နှင်းအဖုတ်ကို ဆက်လိုးပေးတာ လိုချင်လို့ပါ”
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းအရမ်းထန်နေတာကို ကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျကာ
“လိုးပေးလိုက် အကို နှင်းအဖုတ်ကြီး ပြဲထွက်လာအောင် အားနဲ့သာဆောင့်လိုးပေးတော့ သူက အကို့လီးကို အရမ်းကြိုက်နေတာ..လိုးပစ်ဗျာ”
“လိုးပါ အကိုရယ် နှင်းကိုလိုးပါ…ကိုကိုက လိုးခိုင်းနေပြီ နှင်းလဲ အရမ်းခံချင်နေပြီ လိုးပါနော်”
“အဲတာဆိုလဲ လိုးပြီ ညီမလေးရေ ခံစမ်း အသားကုန်သာခံပေတော့”
ထိုအခါမှ ကျော်ကျော်က နှင်းရဲ့ တင်ပါးကျော်ထိရှည်သော ဆံပင်ကို စုပ်ကိုင်ပြီး ခေါင်းကို မော့နေအောင် ဆွဲကာ နောက်မှနေပြီးအသာကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ ကျော်ကျော်ရဲ့ ပြင်းထန်သော လိုးချက်များကြောင့် အရမ်းကောင်းပြီး အဖုတ်တစ်ခုလုံးယားတက်ပြီး အကောင်းကြီး ကောင်းနေတော့သည်။
“အား…..အကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ…..အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ… အင်း… အင်း…..အ…..လိုးပါ…..နှင်းအဖုတ်ကွဲအောင်သာလိုးပါ”
“ဖြောင်း….ဖွတ်…ဖွတ်.. ဖြောင်း… ဖြောင်း….ဖတ်….ဖတ်…..ဖတ်”
အသားကုန် အားနဲ့ စောင့်လိုးသံများ အခန်းတစ်ခုလုံးကို ကျယ်လောင်စွာ ဖြင့် ထွက်ပေါ်နေတော့သည်၊ ကျော်ကျော်လဲ နှင်းအဖုတ်လေးရဲ့ ညှစ်အားတွေ အရမ်းကောင်းပြီး မခံနိုင်တော့ပဲ နှင်းအဖုတ်လေးထဲကို လရည်များတစ်ဖြောဖြောဖြင့်ဖိကပ်ထည့်ကာ ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ ကျော်ကျော်ဆောင့်ချက်အပြင်းစားများနှင့် ပူနွေးလှသော လရည်များ အဖုတ်ထဲ တဆစ်ဆစ် ဖြင့်ပန်းထည့်နေသောကြောင့် နောက်ထပ်တချီ ထပ်ပြီးကာ စောက်ရည်များကော လရည်များပါ အဖုတ်တွင်းမှ စီးကျနေပါတော့သည်။
“အား….ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖုတ်…… အား….ရော့….နင့်ချစ်သူရှေ့…ငါလရည်တွေ… အား…..နင့်အဖုတ်ထဲ ပြည်အောင့် ပန်းထည့်လိုက်ပြီ…..အား”
“အ..အ…ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ် နွေးနေတာပဲ ကောင်းလိုက်တာ အဆုံထိပန်းထည့်ပါ….ကိုကိုရှေ့မှာ အကို့အရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါ…ကောင်းတယ် အကိုရယ်” ဟု အော်ညည်းနေမိတော့သည်။
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပေါ်တွင် ဖိမှောက်ကာ နှင်းဆံပင်ရှည်လေးတွေကို ဆော့ကစားရင် အနားယူနေမိတော့သည်။ ပြီးမှ နှင်းကို အဝတ်စည်းလေး ဖယ်ပေးကာ နှင်း နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းပေးပြီးမေးစရာရှိတာလေးတွေ မေးဖို့ ပြင်လိုက်သည်။
“နှင်း ကောင်းလားနှင်း နှင်း အရမ်းကောင်းပြီး ပြီးသွားတယ်နော်”
“ဟုတ်တယ် ကိုကိုရယ် နှင်း ခု ခံစားရတာ အကောင်းဆုံးပဲ”
“ဘာလို့လဲ ကိုကိုရှေ့တစ်ခြားလီးနဲ့ အလိုးခံရလို့လား”
“ဟုတ်တယ် ကိုကို ရယ် အဲဒီ ခံစားချက် အရမ်းကောင်းတာပဲ နှင်းတကယ်တောင် ဖြစ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်သွားတာ အလိုးခံနေတုန်း”
“ဟာအဲတာဆိုကောင်းတာပေါ့ စိတ်ချ ကိုကိုက တကယ်ဖြစ်အောင် လုပ်တော့မှာ”
“ဟင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ကိုကိုရဲ့”
“နှင်းဘာမှ မတွေးနဲ့ ကိုကို ဒီတစ်လောခင်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိတယ် သူနဲ့ စကားတွေ ပြောထားတယ် နှင်းကြည့်လိုက်”
နှင်းလဲ ကိုကို တို့ ပို့ထားသောစာတွေကိုကြည့်ရင်း
“ဟယ် ကိုကိုက အဲတာတွေတောင် သွားပြောထားတာလား”
“ဟုတ်တယ် နှင်းကိုကိုလဲ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် နှင်းသဘောတူပြီဆို”
“ဖြစ်ပါ့မလားကိုကို ရယ် ဘယ်သူမှန်း မသိ”
“သူစကားပြောတာဆိုတာ လူရည်မွန်ပါပဲ ကိုကိုကတော့ တစ်နေရာမှာချိန်းပြီး စကားပြောကြည့်ကြမယ်လေ အကဲခတ်ကြည့်တာပေါ့ အဆင်ပြေမှ ရှေ့ဆက်မယ်နော်”
“ကိုကို ကောင်းမယ်ထင်သလို လုပ်ပါ နှင်းကတော့ ကိုကို့သဘောပါပဲ”
“ကြည့်စမ်းကောင်မလေး တစ်ခြားလူလီး စုပ်ချင် အလိုးခံချင်နေတာ ငြင်းတောင် မငြင်းဘူး”
“ကိုကို နော် ကိုကိုပဲ အစလာလုပ်ပြီးတော့ နှင်းက သဘောကျသွားတာပေါ့”
“စတာပါ အချစ်ရယ် အဲတာကို ကိုကို သေချာ plan လိုက်တော့မယ် နော် နှင်းအဲဒီနေ့လေးကို ရင်သာခုန်ထားပေတော့”
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းကို ဖက်ထားလိုက်ပြီး ဆံနွယ်လေးတွေကို ပွတ်သတ်ပေးကာ နဖူစလေးကိုနမ်းပေးမိလိုက်ပါတော့သည်။
နှင်းပွင့်လွှာ တစ်ယောက်လဲ ဘာတွေများကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကို တွေးမိပြီး အသည်းယားသလို ပျော်သလိုဖြစ်လာကာ အကြိမ်ကြိမ်ပြီးထားတော့ အဖုတ်လေးမှာလဲ အရည်တွေ စို့ထွက်လာမိပါတော့သည်။